Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2 1 afọ 1 ọnwa gara aga #1421
Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2 11 ọnwa 3 izu gara aga #1442
Ana m akwado gị ka ị nwalee ịga ebe a na Spain nke dị na Canary Island. A na-akpọ ya Gran Canaria ma ọ bụ ihe nlere na Spain. Mụ na ndị enyi m bugara ụgbọ elu gawa Spen ma egbughị oge ọ bụla iji leta agwaetiti a. .You gha achoputa ya onwe gi. Guo ihe ozo n’ebe a www.canaryislandsinfo.co.uk/tenerife/places/los-cristianos/ . maka ozi ndi ozo banyere ebe a.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Sambrook
Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2 11 ọnwa 3 izu gara aga #1444
Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2 11 ọnwa 1 izu gara aga #1448
Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2 11 ọnwa 1 izu gara aga #1449
Oge ike page: 0.200 sekọnd